Molekụla Formula: C14H12ClN3O3
Ọbara arọ: 305.71638
Nchekwa Nche: Mmiri, ọchịchịrị na 0 - 4 Celsius C maka obere oge (ụbọchị na izu) ma ọ bụ -20 Celsius C maka ogologo oge (ọnwa ruo n'afọ)
BMS-564929 ntụ ntụ dị ọnụ ọnụ ma mgbanwe mgbanwe nke na-agbanwe agbanwe na-eji nwayọọ nwayọọ na SARM proionamide. Oge nke ọkara dịgasị iche site na 8 ruo 14 awa, ọ ga-ekwekwa ala dị ala.
BMS-564929 ntụ ntụ bụ onye na-achọ nchọpụta nyocha na androgen receptor modulator (SARM) bụ nke Bristol-Myers Squibb mepụtara maka ọgwụgwọ nke mgbaàmà nke ọdịda afọ na etrogen na ụmụ nwoke ("toropause"). Mgbaàmà ndị a nwere ike ịgụnye ịda mbà n'obi, ụfụ nke ike ahụ na ike, mbelata libido na osteoporosis. Ngwọta na exogenous testosterone dị irè iji gbochie mgbaàmà ndị a ma ejikọta ya na ọtụtụ mmetụta dị njọ, nke kachasị njọ bụ ibuwanye nke gọọmenti prostate, nke nwere ike iduga hypertrophy nke na-abaghị uru na ọbụna ọrịa prostate. Nke a pụtara na ọ dị mkpa ịchọta modulators na-anabata ihe na-emepụta etrogen, bụ nke na-emepụta ụbụrụ na ụfọdụ n'ime anụ ahụ dịka ọkpọ na ọkpụkpụ, ma na-enweghị ihe na-akpali akpali na androgen na prostate.
BMS-564929 Ntụziaka ntụ ntụ ntụ ntụ:
SARMS ọhụrụ kachasị BMS-564929 Powder Supplier Online
1 nyochaa maka BMS-564929 ntụ ntụ
BMS-564929 ntụ ntụ bụ ihe ọmụma
RAD140 (Testolone) ntụ ntụ